Ohatra 9 amin'ny fitondran-tena tadiavina ny sain'ny olon-dehibe - Blog
Efa nanitatra toe-javatra iray ve ianao mba hahazoanao fiaraha-miory, fanampiana, na fotoanany fotsiny?
Misarika ny saina izany.
variana amin'ny findainy ny sipako
Efa nilaza zavatra tsy tena tianao ve ianao mba hampitroatra ny fanehoan-kevitra fotsiny, na dia fahatezerana aza izany fihetsika izany?
Raha mora mitady fitondran-tena mitady ny saina ianao dia mety ho fantatrao lalina izany, saingy tsy maika hanaiky izany ve ianao.
Inona moa fa ny fihetsika toy izany no jerentsika amin'ny hafa amin'ny fomba ratsy?
Ny olon-tiantsika dia hiaritra an'io fihetsika io mandritra ny fotoana lava kokoa noho ny ankamaroan'ny olona, ​​saingy vitsy ny olona no handefitra mandritra ny fotoana tsy voafetra.
Raha tsy mitandrina ianao dia mety manosika ireo tianao io toetra io.
Alohan'ny handresenao ny tenanao momba izany dia zava-dehibe ny mahatadidy fa olombelona mila fiheverana fotsiny.
Ny fiainana dia mifandraika amin'ny fifandraisana izay sendra ny mpiara-belona amintsika, ary mivelatra amin'ny fifandraisana amin'ny hafa isika.
Isika rehetra te SY NILA mari-pahaizana manokana.
ny fomba hisokafana amin'ny fitiavana
Na izany aza, misy tsipika iray eo amin'ny fasika izay manasaraka ny faniriana salama amin'ny fifandraisana amin'ny fikatsahana saina tsy mahasalama.
Misy karazan-antony maro samihafa mety hahatonga ny olon-dehibe hikaroka.
Mety miorina amin'ny zavatra miverina amin'ny fahazazany izy io, na mety ho vokatry ny hetsika vao haingana.
Ny olona sasany dia mandalo fotoana fohy amin'ny faniriana fatratra rehefa miaina fehikibo maranitra ary mitady valiny.
Ny sasany amintsika dia mirona amin'ny fitondran-tena mitady fahalianana hatrany.
Ny fampivelarana filàna fitandremana tsy tapaka dia zavatra tokony hotandremantsika fa raha te hihazona fifandraisana salama amin'ireo olon-tiana, namana na mpiara-miasa isika.
Soa ihany, raha vao fantatrao ny karazana fitondran-tena nasehon'ny olona iray izay mila fitandremana, dia azonao atao ny manomboka mamantatra rehefa manao izany ianao, ary mandray fepetra hanarenana azy.
Ireto misy ohatra mazava tsara hijerena…
1. Mody tsy afaka manao zavatra
Mody mody tsy mahay manao zavatra ianao, raha ny marina, mahavita tanteraka, ka hisy hanao azy ho anao, ary hampifantoka ny sainao aminao raha mbola manao izany izy ireo.
2. Fanjonoana ho fiderana
Asongadinao ireo zava-bitanao, na dia tsy misy dikany aza, amin'ny fomba iray izay midika fa ireo izay mihaino dia tokony hidera anao.
Ataonao izany mba hanomezana toky ny tenanao sy ny fanamarinana.
Na dia manjono fideràna aza isika rehetra indraindray - raha toa ka manana taovolo, akanjo, na asa vaovao, ohatra, dia fanairana fampitandremana hatrany.
3. Tsy manontany momba ny ain'ny olon-kafa sy ny olany
Manjakazaka amin'ny resaka ianao ary mahazo ny fiaraha-miory na torohevitra avy amin'ilay olona iresahanao, saingy mahalana no mamaly.
Mihodina manodidina anao ny tontolonao.
Ny resaka dia tokony ho lafiny roa. Rehefa mahatratra olona iray ianao dia tokony hanontany azy ireo ny fiainany tahaka ny anontaniany ny anao.
Ianao kosa, afaka manana resaka mifantoka tanteraka aminao, ny olanao, ary ny zava-bitanao, ary tsy tsapanao akory.
4. Mampiady hevitra eo amin'ny haino aman-jery sosialy
Miteraka korontana ao amin'ny media sosialy ianao ary mampiady hevitra araka izay tratra mba hanaitra ny fihetsika iray.
Angamba mizara lahatsoratra mampiady hevitra ianao ao amin'ny Facebook ary miandry ny fiakaran'ny fihetsiketsehana.
Na angamba mandefa hafatra cryptic ianao milaza fa misy tsy mety aminao ary avy eo miandry ny fahatongavan'ireo fanehoan-kevitra sy ireo hafatra voakasik'izany.
Fihetsika misy poizina 30 izay tsy tokony hisy toerana eo amin'ny fiainanao
Ahoana no hisorohana ny tantara an-tsehatra ary hampiato azy tsy hanimba ny fiainanao
5. Mahafoy tena
Mitady firaisana ara-nofo amin'ireo izay mahasarika anao ianao ary manova mpiara-miasa matetika rehefa manova ny ba kiraro.
Tsy midika akory izany hoe misy maharatsy ny mihinana sy mankafy firaisana ara-nofo, amin'izay tianao, isaky ny tianao.
Indraindray anefa, manao firaisana ara-nofo be dia be amin'ny olona tsy mitovy ny olona noho ny antony tsy dia matanjaka loatra.
Mety ho ambany ianao tena misy vidiny na mety manantena ianao fa hisy olona akaiky anao hahita ny fihetsikao ary hilaza ny ahiahiny momba izany.
Na, mety tianao ny mifantoka amin'ny fifosana, na dia ratsy na fitsarana izany.
6. Manitatra foana
Manamboatra ny tantara ianao ary tianao ny hahatonga ny toe-javatra ratsy rehetra ho ratsy lavitra noho ny tena izy / mba hahazoana fiaraha-miory.
7.… Ary mitaraina
Mifanentana amin'ny fihoaram-pefy ny fitarainana.
Mahita zavatra itarainana foana ianao, tsy mahita ny lafiny tsara na mahita ny tsara amin'ny toe-javatra rehetra.
8. Miteraka ady hevitra
Rehefa ny saina no kendrena dia matetika tsy maninona na miabo na miiba io fiheverana io, raha mbola eo io.
Miteraka ady hevitra foana ianao noho ny antony tsy misy antony, matetika fotsiny mba hahazoana ny sain'ny olona na olona iadian-kevitrao, na dia ratsy aza izany.
9. Manao zavatra fotsiny ho fiderana
Hitanao fa manao zavatra na mandeha amin'ny toerana fotsiny ianao ho an'ireo zavatra tianao ho hita ao amin'ny Instagram ny porofo an-tsary.
nisaraka i josh sy i nessa
Saingy tsy ny media sosialy ihany.
Izay rehetra ataonao dia entanin'ny fankasitrahana na fiderana ho azonao - fa tsy hoe satria tena tianao ny hanao azy na satria hisy fiatraikany tsara amin'ny fiainanao na ny ain'ny hafa izany dia tafiditra ao anatin'io sokajy io ihany koa.
rehefa mahita olona mandainga ianao
Mifanohitra amin'izay, raha tsy tonga ny fiderana andrasana ary misy ny fitsikerana amin'ny toerany, dia mety hampivily lalana izany.
Na dia misy olona mila fiheverana aza dia tsy hitandrina na inona na inona mihitsy, raha mifamatotra manokana amin'ny dera ianao, dia mety ho sarotra ny miatrika ny fitsikerana.
Inona no antony fakany?
Raha toa anao ny iray amin'ireo voalaza etsy ambony ireo, ny vaovao tsara dia ny fahafantarana izany ny dingana voalohany mankany amin'ny famongorana ny fitondran-tena mitady.
Saingy alohan'ny hanombohanao hanova ny fitondran-tenanao dia mila mandinika hoe avy aiza izy rehetra.
Mipetraha ary mieritrereta hoe iza amin'ireo fihetsika ireo no melohinao, ary ataovy marim-pototra amin'ny tenanao ny antony mahatonga anao hieritreritra ny fihetsikao.
Rehefa dinihina tokoa, tsy dia misy dikany loatra ny fanandramana manova ny fomba fitondranao raha tsy manao na inona na inona hamahana ny fototry ny olana ianao.
Raha mahazo aina ianao amin'izany, dia miresaha amin'ny namanao akaiky na fianakavianao momba ny ahiahyo ary jereo raha manana fahitana momba ny antony anaovanao ireo zavatra ataonao ianao.
Rehefa avy nitady fanahy kely ianao, ary miankina amin'ny zavatra hitanao, mety hahazo tombony amin'ny fitsaboana kely aza ianao hanampiana anao hiatrika ny olanao ary ho lasa olona matoky tena sy mahaleo tena anananao ny mety hahatongavanao .
Tsara ny manamarika fa ny fitondran-tena mitady olona tsy tapaka dia mety hanondro fa manana izany ny olona iray Ny tsy fitoviana amin'ny toetran'ny olona . Kitiho ny rohy raha te hahalala bebe kokoa.
Tsy azonao antoka izay hatao momba ny firona hitadiavana ny saina foana? Miresaha amin'ny mpanolotsaina iray androany izay afaka mitarika anao amin'ny fomba handresena azy. Tsindrio fotsiny eto raha hifandray amin'ny iray.
mandra-pahoviana no tena ho lava ny baolina dragona
dia banky sasha mifandraika amin'ny snoop dogg
ny fomba hiterahana zaza efa lehibe
maso akaiky mafy inona no dikan'izany
ahoana no ahafantarana raha te hanao firaisana ny bandy